Yini i-horoscope ka-Ephreli 7? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Yini i-horoscope ka-Ephreli 7?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Ephreli 7 Usuku lokuzalwa komuntu
Kusho ukuthini ukuzalwa ngo-Ephreli 7?
Ukuba ngama-Aries azalwe ngomhla ka-Ephreli 7th, ubuntu bakho bubonakaliswa ngobuhlakani, ukuvelela namandla. Ingqondo yakho ingenye yezimpahla zakho ezinkulu kakhulu, njengoba uyisebenzisela ukubonisa ubuciko nobuhle nganoma yisiphi isikhathi. Le mfanelo ikuzuzele abangani abaningi empilweni, kepha yisifiso sakho namandla okuncoma kakhulu.
Ososayensi Baxwayisa Ukuthi Inyanga Yakho Yokuzalwa Iyichaza Impilo Yakho Nobuntu Bakho Ososayensi Baxwayisa Inyanga Yakho Yokuzalwa Iyichaza Impilo Yakho Nobuntu bakho Uyakholelwa yini ukuthi amaplanethi anomthelela othile ezimpilweni zethu noma ungumuntu osolayo ocabanga ukuthi kuphambene nesayensi? Isikhathi esizalwa ngaso sithinta izimpilo zethu kanye nempilo yethu. Yini okufanele abantu bayiqaphele kusizini ngayinye yonyaka? Sizamile ukuphendula imibuzo futhi ekugcineni ubona ibhonasi ethokozisayo, uzojabula yini nomsebenzi wakho? Noma uzizwa sengathi kukhona okungahambanga kahle kanti umsebenzi wakho awukona lokho obekufanele ube yikho ngempela? Bheka lo mbhalo futhi ufunde ukuthi imisebenzi incike kanjani enyangeni owazalwa ngayo. Khumbula ukushaya inkinobho ethi Like senze konke okusemandleni Kungani ukuzalwa kwakho? Inyanga iyakuthinta unyaka wonke Abesifazane bathola inani elihlukile lokukhanya kwelanga Kungani kubalulekile Ososayensi abavela eBudapest bacabanga ukuthi ukungabi khona kwelanga kungathinta ukukhula kwengane esibelethweni Okumangazayo ukuthi inyanga yokuzalwa ibuye ithinte amazinga e-dopamine ne-serotonin, injabulo kanye imizwa emnandi -AmaHormone kanye nawo, abacwaningi base-University of Alicante eSpain baze bachaza ukuxhumana phakathi kwenyanga yokuzalwa komuntu nokuthambekela kwezifo nezimo ezingama-27 ezingamahlalakhona Manje ake sibheke izinyanga zokuzalwa nezifo NgoJanuwari labo abazalwa ebusika abasheshi ukuthukuthela futhi bane-choleric kunalabo abazalwa kwezinye izinkathi kufanele babe yiqiniso. Udinga wonke amandla ukukugcina ufudumele ukuze ungamoshi ngemizwa engadingekile, kepha awutholi ilanga eliningi ngalesi sikhathi sonyaka.
Yingakho abantu abazalwa ebusika bejwayele ukucindezela imizwa nokudangala, usuku lokuzalwa lukaJanuwari, luvame ukuba nezilonda esiswini, ukuqunjelwa nokuhlaselwa yinhliziyo, migraines, izinhlungu zezilonda UMA sikhuluma ngezimpawu zamadoda nezokuya esikhathini kwabesifazane (Gosh) kepha kukhona uhlangothi oluhle lwamadoda azalwe ngoJanuwari mancane amathuba okuba nezinkinga ze-thyroid ngokuphindwe kathathu kunalabo abazalwa ngoSepthembaAbantu abazalwa ngoFebhuwari badume ngokuthembeka kwabo, ngakho-ke uma ungafuni ukuzwa iqiniso ngokugunda izinwele kwakho okusha, buza abakwenzi. Babhekwa njengokungaqondakali futhi bethule inkolelo yabo kuncane lapho uthi kungcono Lowo onosuku lokuzalwa futhi ngoFebhuwari kufanele azi ngezinkinga ze-thyroid, i-osteoarthritis, isifo senhliziyo emadodeni kanye ne-thrombosis kwabesifazane, Mashi Bonke abantu abazalwa entwasahlobo bathambekele ku-hyperthermia bangalithanda igama lesifo esiyingozi elizwakala ngathi (akukho ihlaya) kepha empeleni lisho ukuthi laba bantu bahlala benesimo esihle (Oh.) Labo abanosuku lwabo lokuzalwa ngoMashi, Ephreli nango-May kungenzeka yiba nethemba elijabulisayo hhayi ukuxilongwa okuhle, kepha lokho akusho ukuthi laba Bantu akumele bazi ngobungozi bempilo yaboAbesilisa abazalwa ngoMashi bangaba nenkalakatha yesifuba somoya nezinkinga zenhliziyo, kanti abesifazane bangahlushwa i-rheumatism, ukuqunjelwa nesifo samathambo.
Ephreli Enye inyanga yasentwasahlobo enezici ezifanayo ezinezifo ezahlukahlukene. Abesilisa abazalwa ngo-Ephreli bathambekele ekuguleni kwamathambo iziguli ze-Thyroid kanye nabesifazane be-asthma abazalwa ngo-Ephreli kufanele bafunde ngezicubu ze-bronchitis kanye ne-o steoporosisMayAbantu abazalwa ngoMeyi bavame ukuvelela futhi basebenze kanzima, kodwa bavame ukusebenzisa imali eningi futhi banomzwelo omkhulu. Ungathukuthela masinyane La madoda azalwe ngoMeyi angahle abe nezinkinga ngesifo somoya, isifo sikashukela ngisho nokudangala Abesifazane kungenzeka babe ne-osteoporosis, ukuqunjelwa kanye nokungezwani komzimba okungapheli Kwenzeka kanjani kuze kube manje, uzithole ukulesi siphakamiso esingezansi futhi usikhumbule Ukunikela isithupha ngoJuni Akumangazi ukuthi abantu abazalwa ehlobo banombono omuhle ngalo mhlabaKodwa bathambekele ekutholeni i-cyclothymia futhiAkudingeki bakhathazeke, bangavamile, ukushintsha kwemizwelo njaloI-Cyclothymia ingakhula ibe yisifo sengqondo esinjenge-bipolar disorder noma i-Manic Developing -ukucindezelwa kwengqondo okucindezelayo Lo mphumela we-swing ngokusobala ubonakala kubantu abanjalo uma kuqhathaniswa nalabo abazalwa ezinyangeni zasebusika Abesilisa abazalwa ngoJuni bathambekele ekubambeni kolwelwesi, i-bronchitis engapheli nesifo senhliziyo Abesifazane kungenzeka baphathwe yi-rheumatism, ukungasebenzi komchamo, kanye nesifo samathambo kanye namaphesenti angama-22 obuhlungu obubuhlungu emuva, kuyilapho abesifazane abazalwe ngoJuni benamaphesenti angama-35 izimpawu zokunqamuka kokuya esikhathini namaphesenti amancane angama-33 migraines Julayi Abantu b i-orn ngoJulayi iyayinakekela futhi iyayithanda kakhulu imindeni yazo Iyazwela futhi iyathinteka ngokomzwelo futhi ingavikela kakhulu labo abathanda izifoUngase uphathwe yisifuba somoya, izicubu zamathambo nobuhlungu obungapheli bentamo Mhlawumbe unesibopho esikhulu entanyeni yakhoAgastiOkukhulu kakhulu Abantu abakhuthazekile nabasebenza kanzima bathambekele ekubeni abadumile noma abanamandlaBanamandla kazibuthe akhethekile ebuntwini babo angeke avumele abanye bangabi nandabaAbesilisa abazalwe ngo-Agasti bathambekele ekuthini babe ne-osteoporosis, isifuba somoya, nezinkinga ze-thyroid Abesifazane bangaba ne-rheumatism, i-arthritis, ne-thrombosisSepthemba Abantu abazalwa ekwindla kuvame ukuthukuthela.
Kukhona nezindaba ezinhle kulabo abazalwa ngoSepthemba, Okthoba, noNovemba. Abavame ukuhlushwa ukucindezeleka noma ukugula kwe-bipolar Wonke umuntu owazalwa ngoSepthemba angaba nezinkinga nge-osteoporosis nezinkinga ze-thyroid Abesilisa bangaba nesifuba somoya kanye nezicubu zabesifazane, noma kunjalo, izindaba ezimangazayo ukuthi Bonke abantu abazalwa ngoSepthemba banamathuba amancane kakhulu okuhlupheka kusuka ekuguleni okungalaphekiOctober Ungaphikisana noma cha, kepha abantu abazalwe ngo-Okthoba banesibindi esikhulu, kuhambisana nothando nokuhlakanipha ngokomzwelo, leli qiniso lenza ubuntu babo bube ngamadoda amakhulu Abathathile abazalwa ngo-Okthoba bathambekele ezinkingeni ze-thyroid futhi abesifazane abavela kwamanye amazwe kungenzeka une-anemia ne-cholesterol ephezulu. Bobabili abesilisa nabesifazane bangaba ne-osteoporosisNovember Laba bantu abahle bangaziqhenya ngobuqotho babo kwabathandekayo abasebenza kanzima, bezolile futhi abaqoqiwe futhi badlala ngemithetho yabo ukufeza izinhloso zabo benenkani kakhulu ngenhlalakahle yabo badinga nendawo ethile yomuntu owazalwa ngoNovemba r kungenzeka ukuthi unezifo zesikhumba ezingapheli nezinkinga zenhliziyo noma ze-thyroid.
Abesifazane bangahlaselwa yisifo senhliziyo, ukuqunjelwa, noma imithambo ye-varicose. Ngasohlangothini oluhle, abesifazane abazalwa ngoNovemba abanazinkinga zokunqamuka kokuya esikhathini ngoDisemba, abantu abazalwa ngoDisemba bavame ukuhlekisa. Benza abangani kalula futhi bangaba nabantu abaningi obathandayo Amadoda azalwe kule nyanga yokugcina yonyaka kungenzeka ukuthi abe nolwelwesi lwesifo sezinkinga zamehlo nezinkinga zenhliziyoAbesifazane kungenzeka babe ne-asthma thrombosis kanye ne-bronchitis engapheli Futhi manje sekuyisikhathi sebhonasi yemisebenzi ethandwa kakhulu ngemuva kwenyanga yokuzalwa ukulungele ukuthola ukuthi ngabe ukhethe into engalungile? Ngokuhambisana nezici ezithile zobuntu nokugula, abantu abazalwe ezinyangeni ezithile kungenzeka ukuthi balandele inkambo ethile yomsebenzi.
Ungakhohlwa ukuthi isimo sezulu emazweni ahlukene singashintsha izinto futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthi umuntu ngamunye athuthuka ngendlela yakhe. Mhlawumbe wazalwa ngoJuni zonke izici zomuntu owazalwa ngo-Okthoba futhi esikhundleni salokho waba yi-CEO kufanele ube ngusopolitiki Silindele ukuphawula kwakho uma ufuna ukwazi kabanzi ngawe, sazise imicabango yakho
Ngabe u-Ephreli 7th usecusp?
Izincazelo Zosuku Lokuzalwa Labantu Abazalwe Ngomhlaka 7 Ephreli (Ama-Zodiac Sign Aries) UMA Usuku lwakho lokuzalwa lungo-APRIL 7,wenza impilo ikhange. Ufisa ukwenza izinto ezintsha, ukubona ubuso obusha nokuhlola indawo entsha. Njengamanye ama-Arians, ubuntu bosuku lokuzalwa luka-Ephreli 7 bathanda ukulawula noma yini abayenzayo.
Ngabe u-2021 unyaka omubi kuma-Aries?
Ephreli 7Abantu be-zodiac basePisces-AriesCusp. Le yiCusplokuzalwa kabusha. Amaplanethi iNeptune neMars aqondisa lokhuukukhuphuka.
Sawubona, ama-Aries. (Shuffle cards) Uyemukelwa ekufundweni kwakho kwesonto lika-Mashi 8. Kuleli sonto siqala nje lapha.
Ngizophinda ngenze izinto ngokuhlukile. Ngizobe ngidweba umugqa lapha ukuze uthole amandla akho ajwayelekile kuleli sonto ngakho umugqa wokuqala kuzoba ngamandla akho ajwayelekile, umugqa wakho wesibili uzoba amabhlogo noma amabala angaboni, noma yini ongayiboni iyeza kuleli sonto. Umugqa wakho olandelayo uzoba yizindaba ezingalindelekile noma noma yini ongayiboni iza, kufanele ngithi, ngakho-ke kufana nokungalindelekile, futhi umugqa wakho wokugcina lapha uzoba yizinyathelo zakho ezilandelayo okudingeka uzithathe ukuze uthole noma yini nganoma yisiphi isikhathi ofuna lapha isikhathi, ama-Aries.
Ngazise ukuthi ucabangani ngalokhu kuchithwa okungezansi kuphephile. Ngithanda ukusebenzela kukho futhi ngibone ukuthi izinto zihamba kanjani, kodwa ungazise ukuthi ucabangani ngezansi. Futhi, ngizobuza eminye imibuzo emithathu yebo noma cha ekugcineni, ngakho-ke ngizokwenza, ngikutshele uma sekuyisikhathi sokuma kancane, futhi ngizothi misa lesi sihloko ngoba ngithole imibuzo emithathu ethi yebo noma cha izobuzwa.
Ngizodweba amakhadi amathathu, futhi ngizokunikeza u-yebo osheshayo noma cha ngokususelwa kulawo makhadi, kepha ama-Aries, ake sibone ukuthi kwenzekani kuwe. Ngiphuthelwe ikhadi lapha. Angazi ukuthi ngikwenze kanjani lokhu, kepha ake sidonse lokhu khona lapho bese sibona ukuthi sinani lapha kuwe, Aries.
Phakathi kwamandla akho ajwayelekile nansi i-Earth Magic Card. Ngibona sengathi kukuhlanganisa konke lapha, futhi ekugcineni, njengenjwayelo, ngifunde iHolistically, ngibheka konke okukhona, noma ngabe sihlukanisa imibuzo ngandlela thile. Engingakusho ukubuka yonke into lapha, ngibona sengathi kunokuthile okudinga ukugxotshwa.
Kukhona okufanele kwenziwe kube ngokoqobo empilweni yakho. Ngizizwa njengabangani noma kunabantu abangakusiza wenze okuthile kube ngokoqobo ngokwengeziwe. Kucishe kufane nokuthi leli sonto liyindlela engcono yokukuchaza kuleli sonto, njengokuqinisa ubuthakathaka obukuyo Kodwa lokho akuyona into embi Ama-Aries, kodwa ngibona sengathi kungenzeka ukuthi uthole umuntu onohlobo f Uma lokho kwenza umqondo, kuzoba negebe.
Kwabanye benu abathandanayo, kungahle kube sengathi uthola lo muntu ukuthi unjani nobabili ninamakhono ahambisanayo noma nobabili ninezincomo, noma yini engiyifunayo, kodwa kuba sengathi omunye ubephelelisana kahle kakhulu. Okufanayo, ukusebenza noma ibhizinisi, noma yini ozama ukuyizuza lapha ama-Aries, nginomuzwa wokuthi uzothola umuntu, noma okungenani unethuba lokuthola umuntu onamakhono ahambisanayo futhi azokwenza izinto ...
Igama elithi ukuhamba ngomkhumbi ngokushelelayo liza nje emqondweni wami njengoba ngisho lokhu, ngakho-ke ngibona sengathi leli sonto lilonke yindlela ozoyakha ngayo lo mandla wokuhamba ngoseyili ukuthola umuntu ongagcwalisa ikhono elihambisanayo noma okuthile imigqa. Une-The Fool, i-Ace of Cups, nekhadi le-Strength lapha. Ngesizathu esithile ngithola la mandla kuwe engigxila kuwo uqobo, noma ngihlala ngithola okuthile ngendlela oziveza ngayo.
Uze ube nendlovukazi yama-wands ezansi lapha futhi kukhona okuthile ngendlela oyiyona oziveza ngayo enginomuzwa wokuthi abanye benu bazama ukukuguqula. Ngithola la magama anjenge-charisma, uyazi, lawa magama azomela indlela ozibonakalisa ngayo emhlabeni lapha, ama-Aries, futhi nginomuzwa wokuthi iningi lenu lithuthukisa lamakhono noma lisebenza kulawa makhono babe namandla kakhulu, noma bathuthukise amakhono ukuze bathuthukise amakhono abo ngendlela ozibonakalisa ngayo emhlabeni. Leyo yinto yokuqala engiyitholayo lapha.
Into yesibili engiyitholayo ukuthi usukulungele ukuthatha ukweqa ngokuzethemba ubheke entweni egcwalisa kakhulu wena lapha. Igama elithi focus kuphela liza engqondweni. Nginomuzwa wokuthi ungathatha le ndlela, ama-Aries.
Ngizizwa sengathi abanye benu lokhu kungukugxila komphefumulo wakho ngokoqobo. Kukhona okuthile umphefumulo wakho ofuna ukugxila kukho. njengenhloso yakho uma ngikwazi ukusebenzisa lelo gama kahle? Kepha futhi ngizizwa sengathi yinto ezoba ukugxila kwakho kuphela.
Okuthile kuba yilokho ogxila kukho kakhulu. Ngibheka ama-pentacles ayisikhombisa avela endaweni yama-blockages akho, kepha ngasikhathi sinye ngibona sengathi lokho kuyinto lapho ugxila entweni nakuyo yonke into ihlangana lapha. Kuyangimangaza ukuthi kukhona ikhadi eliyikhadinali kule deck okuyi ...
Angikhumbuli ukuthi ibizwa kanjani, kepha ngokuyisisekelo kunenqwaba yamabhulokhi ahlangana ndawonye, ​​futhi ngizwa ukuthi kulawa maPentekoste ayisikhombisa. Kufana nokugxila kakhulu enjongweni yakho bese udonsela ukugxila kwakho ezintweni ezisempilweni yakho ezingabalulekile kangako. Nginomuzwa wokuthi konke okunye kuyahlangana.
Mhlawumbe ufuna uthando, mhlawumbe ufuna impilo engcono noma yini oyifunayo. Nginomuzwa wokuthi uthumela amandla akho lapha. Kufana nokufaka iprojektha umdlalo wokuzilibazisa noma into othanda ukuyenza, yingakho i-gsare ezacile iqala ukukusebenzela lapho izinto ziqala ukukusebenzela.
Uma kungenjalo, (shuffle cards) futhi bengizokwenzelwa izinto. Ngingagxila kokuthize okukugcwalisa lapha, kepha ake sikuqonde lokho. Unezinkemba eziyishumi.
Nginomuzwa wokuthi kukhona uhlobo oluthile lokuphela nesiqalo esisha lapha. Ngokusobala une-The The Fool, emayelana nokuthatha ukweqa kokholo kokunye okusha, iNdlovukazi yamaMugs lapha eletha okuthile empilweni, kanye ne-Four of Wands. Abanye benu bangaphuma emshadweni, noma ningahlukanisa noma nihlukane lapha, futhi lokho kukhombisa lapha kulokhu kufundwa, nizobona ukuthi abanye benu, kodwa ingxenye enkulu, ngibona sengathi lokhu kukhuluma ngokuqala phansi .
Ngisho ne-Four of Wands ingena nge-portal, futhi ngeKhadi Lamandla, ingabe kufana nokuthola ukunakwa okuningi ngenxa yezinto ozenzayo? Ikhadi lamandla libonisa amandla, lingenza ngizizwe sengathi waziwa ngokusebenza kwakho kanzima. Emgqeni wakho olandelayo, kunoma yikuphi ukuvinjelwa noma izindawo eziyimpumputhe onazo kuleli sonto, ngizwa ukuthi lokhu akuyona indawo eyimpumputhe, ngokungagwegwesi. Ngibona sengathi kunebhulokhi lapha esinalo.
Ngizokhuluma ngakho, kepha unekhadi lempumelelo. Le yimephu enhle impela futhi ngizwa sengathi ikhona ...
Ngibona sengathi kunezinto ezithile okudingeka ukuthi ubhekane nazo lapha. I-panther ingamela amandla anobuthi. Nginamanye ama-deck ane-panther futhi athi i-panther ingamela enye indlela yalowo mandla anobuthi noma idinga ukususa okuthile okunoshevu.
Nginomuzwa wokuthi kungenzeka kini abanye benu. Angicabangi ukuthi inobuthi njengoba ucabanga, ngisho nalapha, ama-Aries.
Ngizizwa nginabanye benu, kumane nje kuyindaba yokugxila emgomweni wakho njengoba ngishilo, futhi ngizwa sengathi yilabo abathandi kakhulu noma iningi kakhulu kunalokho okufunayo empilweni yakho. Kwabanye, ngizwa nje ukuthi kungahle kube nempumelelo kuwe. Futhi, lokhu kufana nebala elingaboni, ngakho-ke okuthile kungaphumelela futhi kufana nokuthi kungenzeka ungakuboni.
Manje yini engaphumelela? Ama-Pentacles ayisikhombisa angitshela konke engidinga ukukwazi. Isikhombisa sePentekoste sithi kimi ucabanga ngokuthile. Ngakho-ke ngingasho noma yini oyicabangayo, noma yini oyicabanga kakhulu, futhi noma yini oyibambezelayo kungenzeka ukuthi yilokho okufanele ugxile kukho futhi mhlawumbe kube yimpumelelo enkulu, mhlawumbe ucabanga kakhulu ngayo ngemuva kokuqala ibhizinisi.
Mhlawumbe ucabanga kakhulu ngokuqala umsebenzi omusha. Noma ngabe yini leyo, ama-Pentagon ayisikhombisa athi ngibona sengathi ushintsho lufanele. Inombolo yesibili, ngilapha kulezi zinkemba eziyisishiyagalolunye ukuze ngifunde mayelana nesikhathi.
Kwabanye benu kungahle kube wudaba lwesikhathi oluzoba yisikhathi esithile ngaphambi kokuthi uqale noma yini ofuna ukuqala ngayo nalezi Zisikhombisa ZamaPhentekoste, ngizwa sengathi kunenkinga, futhi ngibona sengathi ukuvinjelwa kungaba ubuhlobo ngezinkomishi ezimbili. Kwabanye benu, ubuhlobo obuthile, okuthile lapho uphinda khona umjikelezo nomuntu oyedwa. Nginomuzwa wokuthi lokhu sekuphele kaningi, kepha ngizwa sengathi lo muntu use ...
Ngithola amagama angajwayelekile njengokuthi banezingwegwe zabo kuwe noma okuthile ngakho-ke ngizizwa sengathi le ndawo eyodwa yoLuthando yilapho lowo muntu esenezingwegwe zakho kuwe, kufana nokuthi basenguyebo, ngakho-ke phinda umjikelezo. Unale menyu yezingane lapha ngakho kwabanye benu kungaba izingane. Kwabanye, ngizwa sengathi nguwe.
Ngibona nje ukuzibandakanya okuningi lapha. Ngakho-ke nginomuzwa wokuthi lokhu kungaba yi-tangle, noma yini ofuna ukuyikhuluma, noma yini ofuna ukuyibiza ngayo. Ngakho-ke ake sikucacise lokhu futhi sibone ukuthi ngandlela thile singakunqoba kanjani lokhu kuvinjelwa nalezi zingqinamba noma izindawo eziyimpumputhe (amakhadi okushova). Wands.
Ama-Wands ayisishiyagalolunye acacile, i-Nine of Wands ithi kunokuthile okwenzeka kuwe kakhulu okudingayo ukuze uphendukele ezinkanukweni zakho. Inkinga yezinkanuko manje, ikakhulukazi eNeptune ePiscesis, singaba nentshisekelo yokwenza isemishi lika-ayisikhilimu elihamba phambili futhi mhlawumbe sicabanga ukuthi ngizoqala ibhizinisi lokwenza u-ayisikhilimu? Ama-sandwich e-Cream, ngihlala ngihlekisa ngalezi zinto. Abantu bacabanga ukuthi ngiyadlala, kepha mane ulinde ubone.
Linda size sifike ku-2025. Sizobona abantu bevula izitolo zikaswidi zikakotini. Cishe sizobona abantu benezitolo lapho behamba khona nge-skateboard esitolo, zonke izinhlobo zezinto ezingasile, akunjalo? Futhi uyazi angazi nokuthi Kuzoba nezinto ezihlanya ukwedlula ezenzeka emsebenzini.
Ngakho-ke lokhu kusho ukuthi kunokuthile okuthanda kakhulu, kepha mhlawumbe kubonakala kuyinto engenangqondo, noma kubonakala sengathi ungakuthola, futhi ngizizwa sengathi kufanele unqobe lo muzwa. Ngezinkemba eziyisishiyagalolunye unezinkomishi ezimbili futhi. Uyabona izinto ezingaphumelela lapha, kepha kufana nokuthi usenaso lesi simo se-angular mhlawumbe nomuntu.
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi lokhu kungaba yinselelo encane kuwe. Ubuye ube nezinketho ezine lapha. Ngiqonde ukuthi, abanye benu bangahle babe kanjena (shuffle cards) Ngicabanga ukuthi kufanele nigxile othandweni lwenu olusha, ama-Seven Cups lapha, futhi kungahle kube nokwesaba okuningi ukungena endleleni futhi emi, ama-Aries.
Nginomuzwa wokuthi kunokwesaba okuningi kakhulu okungakuvimbela nokuthi uqhubekele othandweni olusha, ngakho-ke ngibona sengathi ama-Seven of the Pentacles lawo ma-Seven of the Cups ayefuna ukuvela lapho futhi, ama-Aries.
Lokho kungukucabanga kwenala okumemezayo kimi, awufuni ukukushayela kahle, lapho senza khona okuthile, lapho sikhona nje, siqala ukwenza izinto. Ngicabanga ukuthi lapho sithembekile kithina futhi lapho sizitshela, mhlawumbe siqala ukwenza imikhuba enjalo ukusenza sithukuthele, noma mhlawumbe siqala ukuveza isimilo esidinga ubudlelwano noma okuthile. Ngicabanga ukuthi uma senza lokho siyazibiza, khona-ke singaphuma ezimeni ezinjengalezi.
Ngizizwa nginesidingo sokukutshela lokhu ngakho ngibona sengathi lo ngumyalezo wakho wama-Aries. Ngithembe ukuthi ngikwenzile. Sonke senze, akunjalo? Angizile lapha ukukugxeka noma yini.
Njengoba ngishilo, ngingumuntu onecala kakhulu ngokwenza lokhu. Ngiyinhlanzi angithi? Ngingu-sucker ngakho-ke ngethembe ngiyakuthola, kepha ngizizwa nginabanye benu, leyo yindlela yokuthi uma uyibuka ngempela mhlawumbe wenza izinto ofana nazo, yuck, kungani ngikwenzile ukuthi ebudlelwaneni? Nginomuzwa wokuthi uma uzikhipha uzokubona lokhu, kepha ngicabanga ukuthi ukucabanga ngobuningi kungaba umqondo omuhle. Mhlawumbe udinga ukugqoka, mhlawumbe udinga ukuphuma uhambe nje uthole abanye abantu abazokuvula, bese uthi, oh nkosi yami, umqondo wokuchichima, sengiqedile.
Ungakhathazeki ngakho othandweni. Emugqeni wakho olandelayo lapha, kokungalindelekile, kahle, ngizoqaphela ingane yokuqala yama-Aries, uma ubungazami ukukhulelwa bengizo. Kufanele siqaphele kakhulu manje.
Futhi unemephu yendlela. Ngama-Wands amane, ama-Four Wands angaba ngumshado, kepha ama-Four Wands nawo angamela indlela. Kuyikhadi lokuvulwa kwengosi khona lapha phakathi kwekhadi, futhi kuluhlobo lwekhadi elingahleliwe.
Luhlobo lwemephu yezinto eziwa ngezindlela eziningi ngoba, uyazi, kungenye yalezo zinto ezimele u-11-11 kule mephu, ngakho-ke le yingosi engenzeka ukuthi ikuvulele, kepha unayo Izinkomishi ezinhlanu lapha, izinkomishi ezine neNdlovukazi yamaWands. Bona ukuvula indlela, futhi udinga ukubona ukuthi awunamathele. Unezimbiza ezinhlanu.
Uma evele ephenduka lapha, ubezobona lezi zimbiza ezimbili. Ukhala ngoba e ...
Ukhalela iwayini elichithekile, hhayi ubisi oluchithekileyo, futhi ulahlekelwe ukunambitheka kwewayini, yingakho ekhala, kepha kukhona okuthile ngemuva kwakhe okungaba ngcono kakhulu, kepha akakwazanga nokuzama. Akugcinanga lapho, ubuye akhale ngoba akakwazi ukubhukuda futhi akakwazi ukufika kuleyo nqaba, kodwa uma ungajika nje ubengathola izinkomishi ezimbili, kodwa futhi ubengathola nengidi ngoba uzobona lelo bhuloho eliholela enqabeni. Kwabanye benu, ngicabanga ukuthi ningagxila kakhulu lapha.
AmaPentekoste ayisikhombisa. Isikhombisa sePentekoste, ubheka amaPentekoste. Uthi ngenze umsebenzi owenele? Ngisengowalapha? Ngabe kusamele ngisebenze kulobu budlelwano? Ngabe kusamele ngisebenze kuleli bhizinisi elehlulekile? Yini okufanele ngiyenze? Futhi-ke uma evele ephenduka nje, uzobona le lokhi.
Kunjengokuthi kunokunikezwa noma amathuba futhi ngicabanga ukuthi inselelo enkulu kuwe ukuthola lawo mathuba noma ukubona ukuthi ayini. Ngezindlela eziningi, futhi, impendulo yakho iyindlovukazi yama-wands. Sizocacisa, ngokusobala, futhi sizobona ukuthi impendulo yakho yangempela iyini.
Indlovukazi yamawands inamandla onke. Indlovukazi yamawands ithi ungayibeka kuphi inhliziyo nomphefumulo wakho? Ngicabanga ukuthi inkinga njengamanje ukwahlulela. noma sicabanga nje ukuthi okuthile ngeke kuphumelele, ngakho-ke asikwenzi, akunjalo? Noma ngabe kuyini, kungaba ngumsebenzi, ibhizinisi noma ubudlelwano noma into enjalo.
Mhlawumbe sicabanga ukuthi kungenzeka into engenakwenzeka kithi. Mhlawumbe kuyinto ekude, kepha asiqapheli uma siqala nje, uma silandela nje injabulo yethu, uma silandela injabulo yethu, indlela ibizovuleka ngandlela thile futhi yilokho engikuzwela ngawe lapha, ama-Aries. Kepha ama-Aries, (shuffle cards) ake sikucacise lokhu bese sibona ukuthi sikuphatheleni.
Leli langa, lilahle, ama-Aries, injabulo, injabulo, ukukhanyiselwa. Isangoma, ubonakalisile izinto, kepha uyazi, ubonakalisa zonke lezi zinkomishi ezine ezinkomishini ezine. Inkinga ukuthi izinto azibonisayo mhlawumbe ngeke zibukeke kahle ukuthi ufuna bazibone kanjani.
Ngakho-ke kwesinye isikhathi ngiba nomuzwa wokuthi kufanele sikhethe kancane ngezitsha ezine. Ngempela, engikuzwayo ngawe nomenzi wemilingo ukuthi empeleni lokhu kuyisinyathelo. Uma singakulungele okuthile, umkhathi ungasilethela okuthile okuyisivivinyo, noma indawo yonke ingasilethela okuthile okungafani ngqo nalokho esikufunayo, kepha kukhona ukusenza senze Izinga elilandelayo, futhi kulapho zizwe lapha ngawe Aries.
Ngaleli khadi, kufana nokuthi mhlawumbe ufuna uthando, mhlawumbe nomhlaba wonke uzokulethela umuntu ofuna ukukuthatha ngosuku, kodwa mhlawumbe uthi cha, okungukuthi, ungavumi, yebo, ngoba akudingeki lowo muntu ashade, vele uphume ngosuku, akunjalo? Nginomuzwa wokuthi abantu abaningi banqaba izinsuku ngoba umuntu akaphelele noma abenzi izinombolo ezinamadijithi ayisithupha noma ngabe yini, akunjalo? Ngiqonda ngokuphelele, ngiyaqonda ngokuphelele, angithi? Sonke sinamazinga. Ngabe ngiqamba amanga uma ngithi bekuyi-p. kungenzeka ngaphandle kwamazinga, akunjalo? Kodwa engingakusho ukuthi ngicabanga ukuthi baningi kakhulu abantu abadubulana onyaweni ngenxa yokuthi awuqomi nomuntu oyedwa.
Yilokhu okufanele ukwenze ukuthola umuntu, ikakhulukazi ngendlela indawo yonke esebenza ngayo. Ngakho-ke indawo yonke ingakunika amathuba. Lawa akuwona amathuba aphelele, kepha ngingawathatha noma kunjalo.
Ngingasho futhi ukuthi uma usebenza ngakho, ngingathola okuthile lapha kwabanye benu - umsebenzi wesikhashana, uma usebenza ngokwesivumelwano, uma usebenza ngokuzimela noma wenza omunye walolo hlobo lomsebenzi, ngizwa ngathi kukhona okuthile lapha kungaba nolayini bakho lapho kuba sengathi abalona ikhasimende elifanele noma okuthile okungaphelele. Kungaba yimali encane kakhulu kunalokho okulindele, kepha nginomuzwa wokuthi kuzoholela entweni enkulu kakhulu futhi ngizizwa sengathi ngithandana nalapha uma kungenzeka ukuthi ufuna uthando. Okulandelayo unekhadi le-Temperance.
Yebo, uguqula isimo ngemephu yokuzithoba. Ngizizwa sengathi ikhadi le-temperance lisho ukuthi kuleli qophelo udala iqiniso lakho, ngendlela enkulu kakhulu lapha, ama-Aries. Ngakho-ke, ukufunda okunamandla kakhulu.
Futhi umugqa wakho wokugcina wezinyathelo zakho ezilandelayo, unekhadi le-Co-Dala. Nakanjani bengizogxila ekusebenzisaneni kanye nasekwakhiweni ngokubambisana lapha. Inhlanhla iza kuwe lapha, ama-Aries.
Ngakho-ke, njengoba ngishilo ekuqaleni kokufunda, ngizwa ngathi kukhona ogcwalisa ezinye izikhala ...
Lokho kungaba othandweni nasebhizinisini, akudingeki ukuthi ...
Kungaba yinoma yini. Futhi ngizwa sengathi kungena umuntu ongagcwalisa izikhala ezithile ohlangothini lwamaphenti, izinkemba ezimbili kanye ne-knight yezinkemba. Ngithanda lawo mandla ngoba kucishe kufane nokuthi awusheshi.
Uyazi, ngivame ukuzwa sengathi kunejubane lokugijimisa izinkemba eziyisishiyagalolunye kanye neKnight of Swords, kepha ngithola lo mandla wokuthatha izinto kancane. Kufana nokuthi mhlawumbe wamukela umuntu ozokusiza ebhizinisini lakho, nginomuzwa wokuthi uvumela izinto ukuthi zithuthuke kuphela. Uyabona lapho izinto zihamba khona.
Kuyindawo engaziwa nge-Two of Swords, kepha nginomuzwa wokuthi uzobe uyenza nge Knight of Swords noma kunjalo. Angizithandi neze izinkemba ezimbili ngoba izinkemba ezimbili zingasho kimi ukuthi ubambekile futhi kufanele ujike ufike kulawo mazwe angemva kwakho ngoba yilapho impumelelo ikhona, kodwa ngasikhathi sinye, ngasizathu simbe, nginomuzwa wokuthi ufuna ukujika nale Knight of Swords lapha, kepha ake sikuqonde lokho. Une-ace yama-wands, isiqalo esisha esinothando kakhulu.
Uma uqala kabusha nomunye lapha, kuzophumelela kakhulu. I-King of Wands ibheke ozakwabo abangcwele, iNdlovukazi yamaWands, iNkosi yamaWands khona lapha, ngakho-ke kungenzeka kube uthando oluzongena kuwe futhi nezinqola eziyisikhombisa futhi. Ngakho-ke ngibona sengathi uzokonakala ngokuzikhethela lapha kuleli sonto, ama-Aries, futhi nginomuzwa wokuthi izinyathelo zakho ezilandelayo lapha kufanele zigxile ekudalweni ngokubambisana noma okuthile okuzokulethela injabulo empilweni yakho.
Konke lokhu kufundwa kumayelana nenjabulo, injabulo, injabulo elangeni, ikhadi elibaluleke kunazo zonke emphemeni, ngakho-ke ngibona sengathi kunokuthile ofuna ukukwenza impilo yakho, futhi ngizizwa sengathi kufanele ukwenze nje. Kulula kakhulu. Kepha ama-Aries, sizobuza umbuzo ka-yebo noma cha manje.
Ngakho-ke uma unemibuzo engafika kwemithathu yebo noma cha, futhi lawo makhadi amathathu lapha. Ngakho-ke okukodwa, okubili nokuthathu, misa isikhashana i-athikili uma udinga isikhathi sokuzindla ngemibuzo yakho lapha, ama-Aries, kepha siyaqala. Ngekhadi lokuqala, ngingathi yebo, Ndlovukazi yamaCalices Lapha.
Enembile impela, ifike lapha eceleni kwale ndlovukazi yezindondo. Nginomuzwa wokuthi udinga ukunakekela okuthile lapha, ngakho-ke futhi, noma yimuphi umbuzo oyisiqalo, ngizwa sengathi kufanele uyethembe intuition yakho, kodwa futhi ngizwa sengathi kufanele wenze okuthile ngokunakekela kwakho konke ngothando noma ngabe ubudlelwano, ibhizinisi, umsebenzi, impilo yakho ayinandaba, kepha nginomuzwa wokuthi uma unakekela okuthile, kunguyebo. Ngenombolo yekhadi lesibili, une-yebo, ngingasho ukuthi uMhlaba.
Umhlaba uyikhadi elihle kakhulu, ngakho-ke ngalokho ngingathi yebo, ikakhulukazi uma kunguhlobo oluthile lokuya khona. Ngenombolo yekhadi lesithathu, unama-wands ayisishiyagalolunye. Angizizwa ngikhona lapha.
Nginomuzwa wokuthi kukhona okuvinjiwe lapha okunenombolo yekhadi lesithathu. Into eyodwa engifuna ukuyisho ngale mibuzo ethi yebo noma cha ukuthi ulawula iqiniso lakho. Amakhadi awakwazi ukulawula iqiniso lakho, ngakho-ke noma ngabe lokhu kungu-cha, ama-Wands ayisishiyagalolunye, ungasebenza ngaleyo mandla.
Yilokho engikushoyo lapho, kepha lokhu kuhle impela funda lapha, ama-Aries, ngiyakuthanda. Ngakho-ke ngiyabonga ngokubuka ama-Aries. Ngiyakwazisa kakhulu.
Qiniseka ukuthi ubuka ilanga lakho, inyanga, bese uphuma ukuze uthole isithombe esiphelele salokho okwenzekayo kuwe kuleli sonto. Nginendatshana engezansi echaza ukuthi ungalithola kanjani ilanga lakho, inyanga nokuphuma kwelanga nakho. Zizwe ukhululekile ukuthanda futhi ubhalise futhi, kwazise kakhulu ukwesekwa.
Impela ungazise ukuthi ucabangani ngalokhu kusakazeka, kepha ke k wena, Aries, futhi nakanjani niyajabula isonto lenu
Ubani okufanele ama-Aries ashade?
Izimpawu ezihambisana kakhulu ne-Ama-Ariesngokuvamile kubhekwa njengeGemini, uLeo, iSagittarius ne-Aquarius. Izimpawu ezihambisana kancane ne-Ama-Ariesngokuvamile kubhekwa njengeCancer neCapricorn. Ukuqhathanisa izimpawu zelanga kunganikeza umbono omuhle wokuhambisana.
Ngabe ama-Aries aqotho othandweni?
Ama-Ariesbanolakaqothokubantuuthando. Ngeke badilize abangane noma badalule izimfihlo zabo, futhi bazoba nomhlane wakho noma kungenzekani.24. 2015.
Ubani okufanele afike ku-Aries Taurus cusp ashade?
Ekhuluma ngezimpawu zomoya, u-Aquarius noGemini, bayakwazisa ukwehluka kwabo nenkululeko yabo, futhi bezama ukuzilawula, lokhucusp ngabe,kuthandabakhukhulele kude kuphela. Ngakho-ke, umdlalo omuhle kakhulu we-Ama-Aries-I-Taurus cuspyehlela kwizimpawu ezishiwo ngenhla.
Izimpawu ezihambisana kakhulu ne-I-Taurusngokuvamile kubhekwa njengeCancer, Virgo, Capricorn nePisces. Izimpawu ezihambisana kancane ne-I-Taurusngokuvamile kubhekwa njengoLeo no-Aquarius. Ukuqhathanisa izimpawu zelangacannikeza umbono omuhle ojwayelekile wokuhambisana.
Ngubani u-Aries othandana naye?
UConstance Stellas, umbhali wencwadi ethi Sex Signs: Your Perfect Match Is In The Stars, uthi uma kukhulunywa ngezocansi nobudlelwano besikhathi eside,Ama-Ariesngumdlalo omuhle nezinyeAma-Aries, kanye nezinye izimpawu zomlilo, uLeo noSagittarius.amashumi amabili nanye . 2019.
Ngabe u-2021 unyaka omuhle wama-Aries?
I-unyaka ka-2021kuzoba inzuzounyaka wama-Aries, kuzo zonke izici lapho bangalindela ukuhlangana khona ne-uphumeleleinhlanhla,kuhleezempilo nobudlelwano obuzinzile.Ama-AriesUngalindela ukuthi abantu abamangalisayo bangene ezimpilweni zabo. Laba bantu bazochazeka kakhulu, bathande futhi baqonde ngokwemvelo.13. 2021.
Siyini isibonakaliso sakho se-zodiac uma uzalwe ngo-Ephreli 7?
Siyini isibonakaliso sakho se-Zodiac uma ngabe uzalwe ngo-Ephreli 7? Uma uzalwa ngomhla ka-7 Ephreli, uphawu lwakho lwe-Zodiac ngama-Aries. Njengomuntu wama-Aries
Ngobani abanye babantu abadumile abazalwa ngo-Ephreli 7?
Abantu abadumile abazalwa ngo-Ephreli 7 ngaphansi kophawu lwe-Aries zodiac: UFrancis Ford Coppola, uJackie Chan, uRussell Crowe, uBillie Holiday noDuncan James.
Yini ozoyenza ngosuku lwakho lokuzalwa ngo-Ephreli 7?
UMA Usuku lwakho lokuzalwa lungo-APRIL 7, wenza impilo ihehe. Ufisa ukwenza izinto ezintsha, ukubona ubuso obusha nokuhlola indawo entsha. Eqinisweni, ama-Aries, awunaki ngezinye izikhathi. Kungenzeka ulahlekelwe yizinto. Zama Imibuzo Ehlukile Abantu Abakhuluma Ngayo! Ngaphambi kokuba uhlale phansi nalokho onakho, ususendleleni elandelayo.